Carbide karbaona amin'ny vy | mpanamboatra milina fanamafisana induction | vahaolana fanafanana fampidirana
Hazo kofehy amin'ny vy
Famolavolana karazam-barotra vita amin'ny karbaidia misy induction
Tanjona: Manolora vahaolana amin'ity karazana karbidika ity. Material • Vatana 10mm; carbide tip 57 x 35 x 3 mm • Mandrosoa lamosina • Mitefoka flux fotsy
Temperature: 750 ° C (1382 ° F)
Fitaovana fanamafisam-peo fampidirana DW-UHF-20KW, miaraka amina tobin-tsolika lavitra misy (2) 1.0 μF capacitors (ho an'ny totalin'ny 0.5 μF) coil fanamoriana indra helika 4.5 designed natao sy novolavolaina manokana ho an'ity fampiharana ity.
Vokatr'izany: Voasary ny vatana sy ny karbidika ary manakana ny fikorianan'ny tontolon'ny fivoriambe. Ireo ampahany dia tafapetraka ao anatin'io indraindray io. Kaopy roa vita amin'ny seramika no napetraka eo amin'ny fiolahana manohitra ny tsirairay mba hihazona ny ampahany mandritra ny fanamainana. Azo atao ny maina ny rano amin'ny ala. Ny fampiasana herinaratra fanasitranana dia ampiharina mandra-pahatongan'ny fifampifehezana ao anaty fiara.
• Mahomby ny fikolokoloana ny fiakaran'ny hafanana
• Ny dingana tsy misy fepetra dia misy marina, azo fehezina
• Ny vokatra dia azo averina
Sokajy Technologies Tags kofehy vita amin'ny karbady, Hazo kofehy amin'ny vy, Famolavolana karazam-barotra vita amin'ny karbaidia misy induction, Portable induction Carbide brazing, RF Rafitra System
Famoahana ny karôbidia hiorika amin'ny induction
Tanjona: Manamboatra rakitra miaraka amina rindran-damina miaraka amina rindran-damina ao anaty fampihorohoroana
• Tsy misy carbide
• Vongam-barin'ny haingam-pandeha
• Ny loko mampiseho ny mari-pana
• Mandrobona ny rivotra sy ny ratra mainty
Fitaovana fanalefahana DW-UHF-10kw, misy fitaovana hafanana hafahafa izay misy kapitalista roa 0.33 μF (total 0.66 μF). Ny famolavolan-kodiavina fanindronana izay natsangana sy novolavolaina manokana ho an'ity fampiharana ity.
Fomba fanodinana coil hélique multi-turn no ampiasaina. Nafanaina ny ampahany hamaritana ny fotoana ilaina hahatratrarana ny mari-pana tadiavina sy ny lamina hafanana ilaina. 30 - 45 segondra eo ho eo vao mahatratra 1400 ° F (760 ° C) miankina amin'ny haben'ny ampahany. Ny fllu dia ampiharina amin'ny ampahany manontolo. Misy brim shim dia mifono eo anelanelan'ny vy vy sy karbida. Ny hery fanamafisana induction dia ampiharina mandra-pivoakan'ny ati-doha. Amin'ny alàlan'ny fampitaovana mety dia azo tanterahana ny ampahany.
Vokatra / tombom-barotra • Hafanana miverimberina miverimberina.
Sokajy Technologies Tags karajia, kofehy vita amin'ny karbady, Hazo kofehy amin'ny vy, induction carbide carbide, RF carbide hafanana